Izu-uka obula m biara na be m Ntugharị. Ọ bụghị mgbe niile ka m na-enweta ntụpọ zuru oke, mana ọ dị ọnụ ala yana ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ dị mma. Otú ọ dị, nke kachasị mkpa bụ na Supercuts na-echeta onye m bụ. Mgbe m banyere, ha na-arịọ maka aha m na akara ekwentị, tinye ya na sistemụ ha, ha na-enwetakwa ihe edetu na ogologo oge nke ịkpụ ntutu ikpeazụ m yana otu m si amasị ya (# 3 gburugburu na scissor bee n'elu , guzo n'akụkụ).
Itinye ozi nke (nkeonwe) nke m nyere na-eme ahụmịhe onye ọrụ m na Supercuts ka mma ma na-eme ka m lọghachi. Mmasị na-akpali mmasị, ọ bụ? M hụrụ n'anya Ugboro ebe ha na-echeta aha m, otú m na-amasị m kọfị, otú m na-amasị m Chiefs starched, ma ọ bụ ọbụna otú m na-amasị m na ntutu ịkpụ! M na-abịa azụ ugboro ugboro n'ihi na ahụmịhe dị mma nke ukwuu. Anọla m n'ụfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ fantasticụ mara mma ebe ọ tụrụ m n'anya mgbe onye nlekọta ahụ mere ka ọ cheta aha m. Ọ bụ obere mbọ ahụ na-eme ka m laghachite na ịgbasa azụmahịa m. Ndị ụlọ ọrụ na-anakọta ma jiri data na-aga nke ọma ma nwee ekele.
Ngwaọrụ m, saịtị m, na omume m n'ịntanetị ekwesịghị ịdị iche, nri? Ana m enyefe ozi… oge ụfọdụ ozi onwe m sites na saịtị na sistemụ ịntanetị iji melite ahụmịhe m na ha. Amazon Na-enyocha ihe m zụtara nke ọma wee kwado ihe ndị ọzọ m nwere ike ịmasị. Ọ bụrụ na m gaa na nnukwu blọọgụ, Google Adwords na-eso ọdịnaya nwere ike igosi m ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ m nwere mmasị na ya. Ọ bụrụ na m kwuo okwu na enyi m saịtị, ozi m nwere ike na-kuki ka ọ na-egosipụta otú ahụ ka m ghara dejupụta ozi ọzọ. Nke a dị egwu! Ọ na-azọpụta m oge ma nweta m nsonaazụ kacha mma. Nke a abụghị ihe ọ gbasara?
Eziokwu ahụ bụ na ịme ihe ọ bụla na ntakịrị data ị tinyere na canntanetị nwere ike iji ya iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ gị mma, abụghị nsogbu. A na-anakọta data ahụ n'afọ ofufo, n'ezie. Ikwesighi ịnakwere kuki, nbanye na weebụsaịtị, jiri ndị ọzọ, ma ọ bụ jikọọ na atntanetị ma ọlị. Nye m, nzuzo abụghị nsogbu ma ọlị, nchekwa bụ nsogbu. Nzuzo nzuzo n'oge na-adịbeghị anya gara aga Google nyere ha ọkwa kachasị njọ na 'nzuzo'. Ka m na-agụ akụkọ ahụ, echere m na ọ bụ ihe dị nro ime. Nchịkọta data nke Google bụ naanị iji wulite ahụmịhe kachasị mma maka ndị ọrụ ya yana ijikọ azụmahịa na ndị ahịa.
Google anaghị eresị onye ọ bụla data ahụ, ihe nlere ha bụ ikwe ka azụmaahịa nweta sistemụ ha, ndị na-azụ ahịa ka ha nweta ya, Google jikọtara ha abụọ. Nke ahụ bụ ụzọ dị ịtụnanya na nke m nwere ekele. Achọrọ m ka Google mụta ọtụtụ ihe gbasara m na ahụmịhe m na-eji sọftụwia ha na-akawanye mma kwa ụbọchị. Achọrọ m iru ụlọ ọrụ ha kwadoro m - ndị nwere ike ịnwe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ m nwere ike ịmasị.
Kedụ ka Nzuzo International ga-esi zụta Supercuts ndị na-agbaso ugboro ole m na-eleta, ndị ezinụlọ m, na ụdị nhọrọ ịkpụ ntutu anyị? Ana m eche na ha ga-achọ Supercuts kwụsị ịnakọta ozi ahụ. M ga-ahụ kọwaara onwe m oge ọ bụla m gara… ruo mgbe m kwụsịrị ma hụ onye ọzọ mere na-esochi.